Farmaajo oo hurinaya colaadaha sokeeye ee dalka ka jira | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo hurinaya colaadaha sokeeye ee dalka ka jira
Farmaajo oo waqtigiisa dhamaaday 8-dii Feberaayo ee sanadkii hore ayaa tan iyo 2020 ku dadaalayay in uu xilka sii hayo wax ka baxsan muddadiisii sharciga ahayd, wuxuuna carqalad ku hayaa hirgalinta hanaanka doorashada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah Siyaasiyiinta ku mideysan Golaha Midowga Musharixiinta, ayaa ku eedeeyay Villa Somalia, gaar ahaan Madaxweynahii hore Farmaajo, inuu hurinayo colaadaha sokeeye oo hadda ka holcaya qeybo ka mid ah dalka.
Warsame, oo ka qeyb galayay dood ku saabsan caqabadaha hor taagan doorashada ayaa sheegay in Madaxtooyada Soomaaliya oo shantii sano ee la soo dhaafay, khilaaf xooggan kala dhexeyay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo beelaha, ay hadda hurineyso mas’uulna ka tahay dagaalladii Boosaaso iyo Beledweyne.
Wuxuu intaas ku daray in dhaqanka Villa Somalia uu yahay mid dalka ka riday haadaan dheer, maadaama ay siyaasad ahaan iyo amni ahaaba ku fashilmeen, isla-markaana si joogto ah u abuuraan colaado u dhaxeeya beelaha Soomaaliyeed iyo carqaladeynta Mamullada.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, ayaa soo dhoweeyay shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Axaddii ka furmay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu hagaajinayo qaladaadkii doorashada, uuna shir guddoominayay RW Rooble.
Farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu maleegay afgambi labo jeer 2021, kii ugu dambeeyay wuxuu dhacay 27-kii December, kaasoo uu ka hortagay Ra’iisul Wasaaraha oo helay taageero caalami ah iyo mid deegaan intaba.